Offline Blog ပြုလုပ်နည်းလေးပါ။ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Computers & Technology » Offline Blog ပြုလုပ်နည်းလေးပါ။	7
Offline Blog ပြုလုပ်နည်းလေးပါ။
- woo warr
Posted by woo warr on Jul 3, 2012 in Computers & Technology, Know-How, DIY |7comments
အရင်ဆုံး local host software ဖြစ်တဲ့ xampp ကို Install အရင်လုပ်ပါမယ်။ Download Link ကတော့ ဒီမှာပါ။ပြီးရင် xampp ကို run လိုက်ပါ။ Apache နဲ. MySql ကို Start လုပ်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် localhost အလုပ် လုပ်မလုပ် စမ်းကြည့်ပါမယ်။ mozilla firefox ၏ address bar မှာ localhost/wordpressလို.ရိုက်ကြည့်ပါမယ်။ xampp for windows ဆိုပြီး page တတ်လာရင် localhost ရသွားပါပြီ။
နောက်လိုအပ်တာကတော့ wordpress ပဲဖြစ်ပါတယ်။ wordpress.org မှာ Download ဆွဲလိုက်ပါ။ပြီးလျှင်ရလာတဲ့ zip file ကို စောစောကသွင်းထားတဲ့ xampp folder အောက်က htdocs folder အောက်မှာ zip ဖြည်ချလိုက်ပါ။ ပြီးရင် browser ရဲ. Address bar မှာ localhost/wordpress လို.ရိုက်ပါ။(xampp ထဲက Apche နဲ. MySql ကို start လုပ်ထားရပါမယ်။)
တက်လာသော page မှ wordpress ဆိုတဲ့ folder ကို နှိပ်ပါမယ်။ပြီးလျှင် CreateaConfiguration File ဆိုတာကို နှိပ်ပါ။ Let`s Go! Button ကိုနှိပ်ပါ။ တက်လာတဲ့ wordpress page ကိုခဏထားလိုက်ပါ။
Browser address bar မှာ new tab ခေါ်ပြီး localhost လို.ပြန်ရိုက်ပါမယ်။(new tab မှာပါ။)xampp page ၏ ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှ Tools အောက်မှ phpMyAdmin ကိုနှိပ်ပါ။
တက်လာသော page မှ database တစ်ခုဆောက်ရန်အတွက် database tab အောက်မှ create new database မှာကြိုက်နှစ်သက်ရာ နာမည် တစ်ခုပေးပါ။ပြီးရင် create ကိုနှိပ်ပါ။
ပြီးရင် စောစောက wordpress page ကိုပြန်သွားပြီး database name box မှာ စောစောကပေးခဲ့တဲ့ database name ကိုဖြည့်ပါ။user name မှာ root,Table Prefix မှာ wp_utf8 လို.ဖြည့်ပါ။password ကိုမဖြည့်ပါဘူး။ပြီးရင် submit ကိုနှိပ်ပါ။
Page တစ်ခုတက်လာပါပြီ။ Site Title, UserName , Password , Email address တို.ကိုဖြည့်ပါ။ပြီးရင် Install WordPress ကိုနှိပ်ပါ။
Log In page တက်လာပါပြီ။စောစောက ပေးထားခဲ့တဲ့ Username နဲ. Password ဖြင့် ၀င်လိုက်ပါ။Wordpress dashboard ကိုဝင်သွားပါပြီ။post button မှ Add New ကိုနှိပ်ပြီး post များရေးလို.ရပါပြီ။
မိမိ Blog ကို ပြန်ကြည့်လိုလျှင် localhost/wordpress လို.ရိုက်ပါ။Dashboard ကိုသွားလိုလျှင် localhost/wordpress/wp-admin လို.ရိုက်ပါ။
Online ပေါ်ကို တင်လိုလျှင် အောက်ပါ site များတွင် စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။free hosting site တွေပါ။
မရှင်းလင်းလျှင် jjlay091@gmail.com ကို mail ပို.၍ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
About woo warr
woo warr has written6post in this blog.
View all posts by woo warr →	Blog
Facebook Community Answers
flamingo says: ကို woo warr ရေ…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4269
မစ္စတာ တောက်တဲ့ says: ဒီနေရာမှာတော့
ပုံလေးတွေနဲ့တကွ ကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်း …
flamingo says: ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မစ္စတာ တောက်တဲ့….ပြီးတော့မြန်မာ font ကိုဘယ်လို download ရသလဲဆိုတာကိုနည်းပေးစေချင်ပါတယ်..စက်သစ်မှာသွင်းဖို့ပါ….
မမ အညာသူ says: ခုလိုရှင်းပြပေးတာကျေးဇူးပါနော်
snow white says: ပုံလေးနဲ့ရှင်းပြပေးရင်ပိုကောင်းပါတယ် စနိုးလည်းကွန်ပျူတာအားနည်းလို့ပါ နော် ။ဆက်လက်စောင့်နေမယ် ပြန်ရေးပေးပါနော် ။
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: ကျေးဇူးပါနော်….
နောက်ထပ် လည်းအခုလို …
zmin naing says: ကျေးဇူးတင်တယ်ကွာ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်း မသိနေတာ
အခုမှ စသင်တာမို့ ပါ
In & Out	Log in
Comments By Postနှစ်သစ်မင်္ဂလာ ဂေဇက်ထဲမှာ - ဦး ကျောက်ခဲ - kotun winlattအဆင်ပြေမလားလို့..ဂနန်းစားကြည့်မယ်.. - garuda - garudaForum (OR) တိတ်တဆိတ် လူသတ်သမား - ဦး ကျောက်ခဲ - တိမ်မည်းဆုတောင်းနေရုံနဲ့တော့ ဘာမှ ဖြစ်မလာဘူး - အလင်းဆက် - ဦး ကျောက်ခဲOne More ၏ မော်လူးဒေသ ဖားပန်အေးချမ်းကျေးရွာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မူလတန်းကျောင်းလေးသို့ အလှူ..(၁၃.၄.၂၀၁၃) - uncle gyi - kotun winlattသေချာခြင်း - ဦး ကျောက်ခဲ - မောင် ပေမဟာသင်္ကြန်အကြတ်နေ့ ပုံရိပ်များ - uncle gyi - ကိုပေါက်(မန္တလေး)သင်္ကြန်အလွမ်း - no non negative - ဦး ကျောက်ခဲ“ပိတောက်တွေဝေပြန်ပေါ့ ” - ကိုပေါက်(မန္တလေး) - ကပ္ပိယ မောင်ကြီးမဟာသင်္ကြန် ပုံရိပ်လေးများ - kotun winlatt - မောင် ပေငုဝါ၀ါ တို့ တွဲလွဲခို - kotun winlatt - အရိပ်စစ်စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၄၆ ) ( "ဝ" ဟာ တိုင်းရင်းသားလား ??? ) - Don Juan Ronald - kaiသင်္ကြန်အကျနေ့ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရာဖူးပုံရိပ်များ - မောင် ပေ - P chogyiငုံးဥ အစွမ်း - မောင် ပေ - kaiဘော်စတွန် မာရသွန်ပြေးပွဲမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲ - မောင် ပေ - ကပ္ပိယ မောင်ကြီးလက်တို့ပြီးတော့ ပြောရဦးမယ်…. (Gazette Leaks ) - မောင် ပေ - mobileသတင်းပလင်း အတင်းအဖျင်း gossip - mobile - အလင်းဆက်ကိုယ့်မှာတမ်းးး - အလင်းဆက် - mobileညဟာ တိတ်ဆိတ်နေတယ်။ - အလင်းဆက် - Mr. MarGaနံပါတ်(၁) နှင့် နံပါတ် (၂) - htunwin aung - ဦးကြောင်ကြီး၂၀၁၃ မဟာသင်္ကြန်အဖွင့်ပုံရိပ်များ(မဟာသင်္ကြန်အကြိုနေ့) - kai - ကိုပေါက်(မန္တလေး)စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၀ ) ( ရုရှ စကား ပြောသင့်တယ် ဆိုပဲ ) - kai - ကပ္ပိယ မောင်ကြီးအတာကူးတော့မည်မို့ နှင့် မန္တလေးဂဇက်စာပေချစ်သူများစာပေဆု (၂၀၁၃၊ မတ်လ) - မိုက်ကယ်ဇီးနစ်သ်နိုဗန်ဘာ - မိုက်ကယ်ဇီးနစ်သ်နိုဗန်ဘာ♫♥✿မင်္ဂလာ၇ှိသော နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုပါတယ်♫♥✿ - mobile - KZEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10etone (99153 Kyats )Yin Nyine Nway (77615 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70431 Kyats )zaylay (67079 Kyats )naywoonni (64879 Kyats )weiwei (63809 Kyats )cobra (62008 Kyats )fatty (61354 Kyats )MaMa (54921 Kyats )	Tags2010
Click2Myanmar. Myanmar Online Community since 2000
Free Myanmar Website Lessons
Myanmar Website Lessons